Abenzi beepleyiti ze-alumina ze-ceramic ezilungiselelweyo abavela eTshayina | XTL
Ekhaya > Iimveliso > IAlumina Ceramic > I-Alumina Ceramic Substrate / ipleyiti
95% 99% Umvelisi wepleyiti ye-Alumina ceramic substrate-XTL
Ialuminiyam oxide iipleyiti zeceramic zinokumelana nobushushu obuphezulu kwaye zigcine ukomelela okuphezulu kunye nokuqina. Iipleyiti ze-alumina zeceramic zikwanentsebenzo egqwesileyo ekugqumeni kombane, ukumelana neekhemikhali eziphezulu, bezintle ukuxhathisa kunye nokuxhathisa ubushushu, kunye nokwandiswa kwe-thermal ephantsi. Sinobungakanani obahlukeneyo beemilo ezigqityiweyo esitokhweni kwaye siyakwazi ukwenza ukuveliswa kwesiko kuzo zonke iintlobo zamacandelo e-alumina.
Iipleyiti ze-aluminiyam oxide zeceramic zineentlobo ngeentlobo zezicelo:
• Iipleyiti zealumina zinzima ngokwaneleyo ukuba zibe zizixhobo zesikrweqe sabasebenzi okanye izithuthi.
• I-corrosion resistivity yeepleyiti ze-alumina zibenza zibe yimathiriyeli enkulu kwishishini lemichiza.
• Isetyenziswa njengesixhobo kwiziko loshishino ngenxa yokukwazi ukugcina ubulukhuni bayo kumaqondo obushushu aphezulu.
• Isetyenziselwa ukwenza iinxalenye zeefilim ezibhityileyo ze-CVD, ii-ion implants, ifotolithography, kunye neendawo zesemiconductor.
• Kumashishini emveli, iiseramikhi zealumina zifanelekile kwiimveliso ezifana netyhubhu yokutofa, imilomo yerhasi, kunye nezigqumathelo.
Umxholo wePropati Isalathiso sePropati
Ubuninzi (g/cm3) ≥3.30 g/cm3
Ukufunxwa kwamanzi (%) 0
I-Thermal conductivity(20°C, W/m.k) ≥170
Umda wokwandiswa komlinganiso (RT-400°C,10-6/°C) 4.4
Amandla e-Flexural (MPa) ≥330
Ukuchasana nobuninzi (Ω.cm) ≥10 14
Idielectric rhoqo(1MHz) 9
Umba wokulahla (1MHz) 3×10-4
Amandla eDielectric (KV/mm) ≥15
Uburhabaxa bobuso Ra(μm) 0.3~0.5 (≤20nm)
I-Camber (~/25.4(ubude)) 0.3~0.5
Ipleyiti ye-alumina ceramic eyenziwe ngokwezifiso ipleyiti alumina ceramic
Iiseramics ze-alumina zezona zixhobo ziphezulu ze-ceramic ezenziwe ngokuyintloko nge-aluminiyam kunye ne-oxygen. Baziwa ngokuba phakathi kwezona zinto zigqwesileyo kwaye zisetyenziswa kakhulu izixhobo zeceramic kwiipleyiti kumashishini amaninzi. Abavelisi abaninzi bakhetha iipleyiti ze-alumina ze-ceramic ngenxa yezizathu ezininzi, kubandakanya ubushushu obugqwesileyo, amandla okugquma, ukuxhathisa umhlwa, indawo yokunyibilika ephezulu, kunye nobunzima obugqithisileyo.